Uncategorized – စာမျက်နှာ 20 – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized (စာမျက်နှာ 20)
Stone Cutters And Carvers, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ခံမှုနမူနာ
Lower or define stone in accordance with patterns and diagrams. Career Skills Requirement Authenticate depths and proportions of reduces or designs to make sure adherence to specs, အသေးစိတ်အစီအစဉ်, သို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းများ, using calibrating devices. Construct or by transferring these from tracing report, applying scribes or chalk and testing equipment. Drill holes …
စည်ပင်သာယာစာရေးယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ်
ရထားလမ်း-Track ချနဲ့ Maintenance ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / Obligation Sample and Functions Set, restore, နှင့်စံရထားလမ်းကုမ္ပဏီတွင်သို့မဟုတ်စက်ရုံမီတာများတွင်အသုံးပြုစံသို့မဟုတ်ကျဉ်းမြောင်းသည့်ရထားလမ်း tools များနှင့်စပ်လျဉ်းသောငှာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်, ကျောက်မိုင်းများနှင့်မိုင်း. လှေငြိမ်သန့်ရှင်းရေးရထားလမ်းအိပ်ရာနှင့်စက်အော်ပရေတာစက်ကိုအလုပျသမားအပေါ် tamping ပါရှိသည်. ရာထူး …
အပူနှင့်အဲယားကွန်းမက္ကင်းနစ်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Roles and Responsibility Template Install, ကုမ္ပဏီ, သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းအိမ်ရာများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လေထုနှင့်အပူအေးစက်နည်းစနစ် restore. Job Skills Requirement Fix or replace wiring, အပိုင်းပိုင်း, သို့မဟုတ်ပျက်ယွင်းနေ tools များ. ဆက်လက်များအတွက်လျှပ်စစ်ပုဒ်သို့မဟုတ်အပိုငျးပိုငျး Check, employing test …
Nursery Workers Job Description / ဂျော့ဘ်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများနမူနာ
Workin room establishments or at buyer location sowing, စိုက်ပျိုး, စုဆောင်းမှု, and transplanting trees, shrubbery, or crops. Career Skills Need Seed, squirt, marijuana, fertilize, and water crops, shrubbery, and timber, utilizing hand tools and gardening resources. Pick crops, and implant or pot and tag these. Sense cropsI foliage and notice their …
ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်း, အကူးအပြောင်းပြီးတော့အချင်းချင်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ်
မော်တာသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားနည်းပြ Get, မကြာခဏလမ်းကြောင်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပါအဝင်, ဖြစ်ရပ်များ, နှင့်ပုဂ္ဂလိကယုန်ကလေး. တစ်ဦးချင်းစီအိတ်ကို အသုံးပြု. တန်ခိုးအားဖြင့်ကူညီကြသည်. ပုံမှန်အတိုင်းသို့မဟုတ် 'passes ကိုစုသိမ်းစေခြင်းငှါ,. Job Skills Qualification Check autos and examine oil petrol, နှင့်ရှေ့ဆက်ထွက်ခွာသွား၏ပ္ပံနေကြပါတယ်. ခရီးသည် panel က may နိုင်အောင်ဒေသများ running မှာကစားကွင်းကားများ. …
လုံခြုံရေးအစောင့်ကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့တာဝန်ယူမှု Template ကို
ကာကွယ်, ခိုးမှုရပ်တန့်ရန်ကင်းလှည့်, တိုက်ခိုက်ခြင်း. xray နှင့်သတ္တု detector ဂီယာအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ,. Job Skills Qualification Response investigate trouble and sensors. အလုပျသမားမြား၏ entry ကိုနှင့်ခရီးစစ်ဆေးပြီးအတည်ပြု, စာဖတ်သူများ, နှင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များခိုးယူဆန့်ကျင်ကာကှယျနှင့်ဒေသများ၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဆက်လက်. ပြဿနာတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထုတ်လုပ်ရန်, such …
Acquire tutorial materials, co-ordinate educative information, and include technologies that is recent in particular fields offering coaches and educators with tips regarding building curricula and performing courses. Includes product owners that are tutorial and experts, and academic professionals. Job Skills Qualification Carryout or take part in workshops, ကော်မတီများ, and conferences …
အားကစားဆိုင်ရာဆေးပညာသမားတော်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ယူမှု Template ကို
ခွဲခြားသတ်မှတ်, စားသောကျပှဲ, နှင့်အားကစားကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဒဏ်ရာများနှင့်အတူပြဿနာများသက်သာစေနိုင်ကြောင်းကူညီ, ကြံ့ခိုင်ရေးကြောင်းပညာရေး, နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ. Career Skills Qualification Select and make medications or healthcare devices to be taken fully to fitness competitors sites. ယောဂီများနှင့်လမ်းညွှန်မှ installation ကိုနှိပ်ပြီး 'ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာများအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အကူအညီ. Suggest against …
စာမျက်နှာ 20 ၏ 56« ပဌမ...10«1819202122 » 304050...နောက်ဆုံး »